isigamu esikhulu sokuphakelwa kwezitshalo zokudla kwezimboni nezentengiso
Ikhono:10~ 15tons / h
Usayizi wokugcina we-pellet:2~ 15mm
Isetshenziselwa:Izinkomo, ingulube, imbuzi,inkomo, imvu, unogwaja, inyama yenkukhu, idada, inhlanzi, njll
Ama-Raw material:Ukolweni,ummbila,ukolweni,ikhekhe likabhontshisi,ukudla kwamathambo,uwoyela wezinhlanzi njll
Kusetshenziswa ummbila omkhulu we-pellet wokugaya ummbila we-pelletizing ,ukolweni,ummbila,imbali imbala, newayini lamazambane, i-clover yotshani, utshani bokudlwengula, njll. ezifundeni zezinkomo, ingulube, imbuzi,inkomo, imvu, unogwaja, inyama yenkukhu, idada, inhlanzi, njll. Imbila yokudla okuphehlwa yizimboni iyimishini ekhethwayo yokwenza ifolishi embonini yokukhiqiza ephakelayo enkulu naphakathi kwepulazi ngalinye. Lo mshini wokugaya izindandatho ungadonsa izinhlobo ezahlukene zezinto zokwenziwa kwemfuyo, okuphakelayo emanzini, Ukudla kwezilwane zasekhaya, umphunga wotshani nezinto zomanyolo we organic.Umshini ofakelwe izinto zokugaya ezitolo ezixubile ezi-diameter zazo zisuka ku-1.5mm ziye ku-20mm, ama-feed pellet mill alungele izinto ezahlukahlukene ukufeza imiphumela emangalisayo.
kungani senza ama-feed pellet ?
1.Yiba lula ukubhuka. Ukuphaka imash yokudla kanye nokudla kotshani kudinga uketshezi oluncane noma akukho. Ngakho-ke, okuqukethwe komswakama kokuphakelwa okuphephile kulingana impela nalokho ngaphambili.
2.Thatha inzuzo yezomnotho. Kuyabiza kakhulu kunokuphakelwa kokudla.
3.Ukugaya kahle. Ngomsakazo ophakeme we-feed, ingaphezulu bushelelezi futhi ingaphakathi belaphekile , umsoco ugaya kahle futhi udonswa yizinkomo.
4.Vikela izifo namagciwane. Ukwehla kwezimpawu kuthinta izinto zokumelana ne-trypsin kubhontshisi nefreyimu enqubweni yokuthambisa, ekhulula ukugaya futhi kuqothule amaqanda wesikelemu we-parasitic kanye ne-microorganism ye-pathogenic ukwehlisa izifo zokugaya.
5.Umbila wokudla okugaywayo wamukela izinto ezixubile ukusabalalisa ukondliwa kwezinkomo ngesizathu sokucabanga futhi uvikele abadla ukudla okukhethiweyo.Ukuqina kwamaphinifa kukhulisa isikhathi sokuhlafunwa kwezinkomo ukwenza ngcono inqubo yokugaya ukudla kwazo.
6.Ngenxa yezinto zokushisa ukufudumala kwenqubo, i-pellets 'luster ivela kangcono.Ukushisa kufaka iphunga elincane le-pellets, ngenkathi ezinye izinqubo zokuphakelayo zingenzi.
Ukwakheka kokudla okusamaphayiphu amakhulu
I-feed enkulu ye-pellet feed ikakhulu iqukethe insiza yokondla (isikulufu feeder), isimo,cindezela uhlelo lokuhambisa igumbi, ukuvikelwa okweqile kanye nohlelo lokulawulwa kukagesi. Ukuphakelwa kwendandatho yokufa kwendandatho kuphoqelelwa kwigumbi lokuthambisa bese kusatshalaliswa ngababhali bejubane eliphakeme kakhulu. Kubhalwe ngokuhambisa, intengo enengqondo nokukhipha okuphezulu. Amandla wokukhipha aqala ku-10 ~ 15t / h
Ukuqashwa kokuhlinzwa kokwenza okuphakelayo kwe-pellet enkulu
1.Ukugqoka indwangu efanelekile ngaphambi kokuhlangenwe nakho kokuqala kokuqinisekisa isimo esihle.
2.Vimbela ukufaka izingalo zakho emshinini onikezwe amandla. Uma kunesidingo, Sebenzisa induku ukusiza ukulayisha.
3.Faka okunye okune-powdery ngaphambi kokuqala umshini. Bese ushiye okunye kwayo ngemuva kokuthi umshini uvaliwe. Uma kwenzeka ukuthi i-compression roller ishubile ngokumelene nethempulethi futhi ingena ngeze .
4.Uma umshini unamathele, uhlelo oluphuthumayo ukuthi luwucishe bese ucindezela ukucindezela bese uzama ukuluvula futhi.
5.Qinisekisa ukuthi i-compression roller iyalungiswa ngaso sonke isikhathi kuze kube yilapho ibhalansi ikhulula ngemuva kokusebenza.
6.Hlola ukuqina kwebhande njalo, uma kwenzeka ibhande elishelelayo nokukhiqizwa okuphansi.
Amapharamitha wezobuchwepheshe we-feed enkulu ye-pellet
(t / h) 1~ 1.5 1.5~ 2,5 2~ 4 3~ 6 6~ 10
Ividiyo esebenzayo yamamitha amakhulu we-pellet feed